Eng Camey oo soo Xiray Shirwaynihii Wadatashiga Maamul Baahinta Gobalada Iyo Degmooyinka Puntland – Radio Daljir
Abriil 14, 2015 9:44 b 0
Talaado, Abriil 14, 2015 (Daljir) — Shirweynaha Koowaad ee wadatashiga Maamul Baahinta Degmooyinka iyo Goballada Puntland oo mudo sedex maalmood ah ka socday Magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa maanta la soo gabagabeeyey.
Shirweynahaan oo ay ka soo qayb gudoomiyayaasha 43 degmo ee Puntland iyo gudoomiyayaaasha 9-ka gobol, iyadoo sidoo kale ay ka qeyb galeen xog-hayaasha iyo iskuduwayaasha ilaa heer gobol waxaana furay Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas. .
Shirkan intii uu socday ayaa lagu lafa guray maamul baahinta iyo degmooyinka dhibaatooyinka iyo caqabadaha hortaagan maamul baahinta iyo in la gaaro hadafka maamul baahineed.
Agaasimaha guud ee wasaaraddaha arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cali Faarax oo xirtaankii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in shirkaan xooga lagu saaray kor uqaadida tayada maamulada degmooyinka wacyi galintooda iyo baahintooda waxaana uu sheegay in lagu hishiiyey 9-qodob oo loo arkay in ay muhiim u yihiin maamul baahinta degmooyinka iyo Goballada Puntland.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng.Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camay oo shirka soo xiray ayaa kula dardaarmay Gudoomiyayaasha gobalada iyo degmooyinka in waxyaabihii laysla gartay ay ku maamulaan Gobalada iyo Degmooyinka ay maamulaan.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng.Camay ayaa sheegay in dowladdu ay kormeer ku samayn doonto sida ay u shaqaynayaan Maamulada Gobalada iyo degmooyinka waxaana uu sheegay in cidii xil gudasho la,aan lagu helo la badali doono.
Gudoomiyayaasha degmooyinka iyo gobalada oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in ay ku faraxsanyihiin waxyaabaha ka soo baxay shirkan waxaana ay balan qaadeen in fulin doonaan waana markii ugu horaysay oo shir noocaan oo kale ah lagu qabto Puntland.